Home Whitening | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "घर whitening,"
दाँत Whitening - रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो छ
दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका
हाम्रो दाँत धेरै महत्त्वपूर्ण छन्. हामी तिनीहरूलाई खान र कुरा सबै समय प्रयोग, आदि. तिनीहरूलाई बिना जीवन कल्पना. तिनीहरूले तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु छैन भनेर भन्न – बस व्यक्तिहरूलाई तपाईं राख्न चाहन्छु. त्यसैले तिनीहरूलाई कायम अत्यावश्यक छ. हामी सबै हामी विज्ञापनहरु देख्न भनेर सेतो चम्केको दाँत चाहनुहुन्छ, पत्रिका आदि. तिनीहरूलाई हासिल गर्न, हामी प्रयोग गर्छौ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका. whitening स्ट्रिप्स, टूथपेस्ट, यस दन्त चिकित्सक संग धुने वा उपचार दांत को एक हुन सक्छ दाँत सेतो गर्न सबै भन्दा राम्रो.
रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो छ. हामी जवान हुँदा हाम्रो दाँत हेरचाह सुरु गर्नुपर्छ. हामी सानो छँदा हामी धेरै मीठो खान छैन सोधियो, क्रममा चकलेट वा कुनै पनि अम्लीय पेय हाम्रो दाँत पहेंलो बारी रोक्न. धूम्रपान, कैफीन, वृद्ध र लागूपदार्थको साथै हाम्रो दाँत दाग सक्छ. हामी किन थाह हुनुपर्छ भन्ने छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका, हामीलाई सजग र दाँत दाग सिर्जना ती अनावश्यक कुराहरू रोक्न लागि.
दाँत दाग रोक्न सुझाव
ब्रश र नियमित floss. यो दाँत दाग रोक्न साधारण र सबै भन्दा आधारभूत तरिका हो.
टूथपेस्ट Whitening चारैतिर छ. तिनीहरूले बजेट अनुकूल मूल्यहरु मा किराना पसलहरू र औषधि पसल मा किनेको गर्न सकिन्छ. तिनीहरू अत्यधिक तिनीहरूले दाँत सेतो गर्न सक्ने publicized छन् तर वास्तवमा तिनीहरूले केवल आंशिक दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ. एउटा छाप स्वीकृत तिनीहरूले मार्क पनि निश्चित र चिकित्सकीय दाँत सेतो साबित.
गरेको हामी पिउन के हेर्न गरौं. यस्तो कफी रूपमा कैफीन मा धनी छन् भनेर पेय, सोडा, चिया, आदि. दोषी नही हो. यी टाढा रहन वा सानो अंश तिनीहरूलाई लिन प्रयास.
धूम्रपान बस आफ्नो फोक्सोमा र छालामा क्षति गर्दैन; तिनीहरूले पनि बिगार्न र तिनीहरूलाई टाढा रहन हामीलाई थप कारण दिने आफ्नो दाँत गाढा.
हामी लिन चक्की केही पनि हाम्रो दाँत दाग गर्न सक्छ. हाम्रो दाँत गाढा हुन सक्छ कि Tetraclyne एंटीबायोटिक्स लागि बाहिर हेर्न.
स्ट्रिप्स र gels Whitening पनि हुन सक्छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका, त्यहाँ काउन्टर उनलाई धेरै छन् र त्यो महंगा छन्.
लिन घर आफ्नो दन्त चिकित्सक देखि ट्रे दांत महंगा हुन सक्छ, तर यी किनभने यो हुन सक्छ तपाईं लागि अनुकूल फिट छन् दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका र तिनीहरूले ब्लीच अधिकतम whitening, लागि दाँत सम्पर्कमा रहन्छ भनी सुनिश्चित गर्न देखि तपाईं ती दाँत सेतो मदत गर्नेछ.
यदि सबै अरू असफल. यो लागि रोज्न आफ्नो अन्तिम विकल्प हो दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका सम्बन्ध गाँसिसकेको वा बरतन veneers विचार छ, तिनीहरूले धेरै खर्च तर तिनीहरूले दांत दाँत सबै निराशा समाधान हुनेछ.
यी केही छन् दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका कि May मद्दत आफ्नो दाँत जीवंत र चमकदार हेर्न बनाउँछ. तर तिनीहरूलाई रोकेको सधैं उपचार भन्दा राम्रो छ. त्यसैले सबै बाटो मुस्कान गर्न आफ्नो दाँत दाग सक्छ कि व्यक्तिहरूलाई टाढा रहन. तपाईं ती सुझाव सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईं साथै सन्दर्भमा थप नातेदार जानकारीको लागि इन्टरनेट खोजी गर्न सक्छ दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:15 AM
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: दाँत सेतो सबै भन्दा राम्रो तरिका, घर whitening,, दाँत दाग रोक्न सुझाव, सेतो चम्केको दाँत, सेतो दाँत